समाचार - 4K News Nepal
Nov262021 by admin2No Comments
चितवनमा मासु र महंगो व्रा’ण्डका म’दिराको माग वढ्यो नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनका कारण चितवन क्षेत्रमा म’दिरा र मासुको माग वढेको छ। महाधिवेशनमा आएका सहभागिहरुको उपस्थितीका कारण अन्य क्षेत्रसँगै म’दिरा र मासुको विक्रि वढेको ब्यवसायीहरु वताउँछन् । मंसिर १२ सम्म सञ्चालन हुने एमालको महाधिवेशन आज नारायणगढस्थित नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन भएको छ । बन्दसत्र सौराहामा हुँदैछ ।महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा १९ सय ९९ सहभागी छन् । केन्द्रीय कमिटी, आयोग सहितका २ हजार जना प्रतिनिधि सहभागी भएको महाधिवेशनमा एमालेले ५ लाख मानिस उतार्ने वताएको थियो । सहभागिहरुको उपस्थिती खचाखच छ। महाधिबेशनमा १७ हजार क्वीन्टलसम्म मासु खपत हुने सौराहाका व्यवसायीको अनुमान गरेका थिए । दैनिक ३ हजार क्वीन्टलसम्म मासु खपत हुने गरेको सौराहामा तोकिएको समयमा सकिए महाधिवेशनको समयमा मात्र १७ हजार क्वीन्टल खपत हुने अनुमान गरिएको थ
बिचरा , भर्खरै बिहे गरेका थिए : खुकुरी प्र’हार बाट कलिलै उमेरमा गयाे ज्या’न खक्राैला / टीकापुर नगरपालिका वडा न ८ कालिमाटीमा खुकुरी प्र’हारबाट एक बालककाे ज्या’न गएकाे छ । टीकापुर नगरपालिका वडा न ८ कमलगाउँका १७ बर्षिया बालक अनुप साउँदकाे खुकुरी प्र’हारबाट ज्या’न गएकाे हाेराति करिब साढे ८ बजे तिर डिजेमा नाच्ने बेलामा सामान्य विवाद भएको र साेहि बेला भजनी नगरपालिका वडा न ३ ठेकिपुर का किरण साउँदले प्र’हार गरेकाे खुकुरीबाट अनुपकाे ज्या’न गएकाे कालाकुण्डा प्रहरी चाैकिका प्रहरी नायब निरिक्षक राजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । खुकुरी प्र’हारबाट आन्द्रा बाहिर निस्केकाे र उपचारका लागि टीकापुर अस्पताल लगिएको र उपचारका क्रममा नै ज्या’न गएकाे प्रहरीले जानकारी दिएको छ
बले र प्रिज्माको भयो ‘ब्रे’कअप’ ! दुवै अलग अलग बाटोमा यसबारे प्रिज्माले दिईन यस्तो प्र’ष्टीकर’ण
पछिल्लो समय सागर लम्साल बले र प्रिज्मा खतिवडा फेरी एका एक चर्चामा आएकाछन । टीकटकबाट उदाएकी प्रिज्मा र भद्रगोल टिभी सिरियलबाट आएका बले केही वर्षदेखि प्रेममा रहेको चर्चा चुलिएको थियो । उनीहरुले धेरै म्युजिक भिडिओ पनि सँगै गरेका थिए । फागुनमा बिहे गर्ने चर्चा पनि चलिरहेको थियो । प्रेममा रहेको चर्चा चलेपनि यी दुईले आफूहरु प्रेममा रहेको खबरलाई स्वीकार गरेका भने थियनन । यतिबेला भने यी दुई अ’लग भएको खबरले फेरी चर्चा पाएको छ । प्रायः सामाजिक संजालमा सँगै देखिने उनीहरु पछिल्लो समय भने एकअर्कासँगको भिडिओ पोस्ट गरेका छैनन् । उनीहरु म्युजिक भिडिओमा पनि सँगै देखिन छाडेका छन् । उनीहरु अहिले अ’लग भएको जनाइएको छ । स्रोतले बिहेको कुरा नमिल्दा सम्बन्धमा दरार आएको दावी गरेको छ । तर, यी दुईजना अहिले पनि आफूहरुको सम्बन्धलाई स्वीका’र्न तयार छैनन् । ब्रे’कअपको ह’ल्लाबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रिज्माले भ
नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनलाई विश्वमै दुर्लभ देखिने रोगका कारण विदेशमै उपचार गरिएको छ । बैंककमा करिब डेढ महिना देखि उपचारार्थ रहेका पुनलाई थप उपचारका लागि चीनको थर्ड पिपुल्स हस्पिटल अफ सेनसेज लगिएको छ । उनलाई विश्मै विरलै देखिने जटिल प्रकृतिको जण्डिस लागेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । बैंककस्थित समितिभेज अस्पतालवाट उनलाई चिन तर्फ लगिएको हो । ​पूर्वअर्थ तथा ऊर्जामन्त्री समेत रहेका पुनको स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि थप उपचारका लागि चीन लगिएको उनका पूर्व स्वकीय सचिव तथा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा चापागाँईले जानकारी दिए । नेता पुनसँगै पूर्वसभामुख तथा उनकी पत्नी ओनसरी घर्ती र छोरी शीला बैंककबाट चीनको सेनजेन उडेका छन् । उनीहरु आजै मध्यान्ह अस्पताल पुगेर उपचार सुरु हुने चापागाँईले जानकारी दिए । ​समितिभेज अस्पतालमा उपचार गरिरहेका चिकित्सकहरुले उल्लेख्य सु
गोरखाको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मनकामना मन्दिरका पुजारी बज्राचार्यको हृदयाघातबाट मृत्यु
गोरखाको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मनकामना मन्दिरमा पर्व पूजाका लागि गुठी संस्थानबाट खटिई आउनुभएका एक गुर्जु (पुजारी) को हृदयाघातबाट मृत्यु भएको छ । हरेक वर्षमा दुई पटक मनकामना मन्दिरमा लाग्ने पर्व पूजाका लागि आउनुभएका काठमाडौँ महानगरपालिका–४ का रत्नराज बज्राचार्यको हृदयाघातबाट गए राति निधन भएको मनकामनाका स्थानीय दिनेश जोशीले जानकारी दिनुभयो । पुजारी बज्राचार्यको राति १० बजे स्वास्थ्यमा समस्या आएको र केही क्षणमा नै मृत्यु भएको जोशीले बताउनुभयो । घटनाको जानकारी पाएलगत्तै प्रहरीको एकटोली अनुसन्धानका लागि मनकामना पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, केन्द्रीकृत पाठ्यक्रमले मात्र स्थानीय खाँचो पूरा गर्न नसक्ने भएकाले पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारेको छ । नागरिकलाई आफ्नै भूगोलको माया गरी सम्मानित जीवन जिउन स्था
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा कार्यरत सडक दु’र्घटनामा निधन भएकी नुवाकोटकी सविता रुम्बा तामाङको श’व नेपाल ल्याईएको छ ।नेपाल तामाङ घेदुङ प्रवास कार्य समिति कतार र नेपालबाट वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालको पहलमा नेपाली राजदूतावास दोहा कतारको समन्वयमा मृतक तामाङको श’ब नेपाल पठाउन सफल भएको घेदुङ कतारका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष तामाङले मृ’तक श’व नेपाल पठाउन सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। मृ’तक तामाङको शव बुधबार बिहान ००:४५ बजेकाे कतार एयरलाइन्सको उडानमा मार्फत नेपाल पठाएर परिवार तथा आफन्तको उपस्थितिमा काठमाडौं स्थित पावन तिर्थस्थल स्वयम्भूमा बुधबार दिउसोको ३:०० बजे बौद्ध विधि अनुसार अन्तेस्टी गरिएको घेदुङ कतारका निबर्तमान अध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालको कतार प्रतिनिधि एक्का प्रसाद तामाङ (योगेन्द्र)ले बताए। तिहार लगत
चितवन- चितवनमा शुक्रबारबाट नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशन हुँदै छ । मुलुकका विभिन्न स्थानबाट आएका नेता कार्यकर्ताहरूले चितवनका होटेल भरिभराउ भएका बेला जनकपुर, महोत्तरी र सर्लाहीबाट आएका एमाले कर्याकर्ताले भने सडकमै खाना पकाएर खाएका छन् । जनकपुरबाट चारवटा जिपमा ५७ जनाको टोली शुक्रबार बिहान ८ बजे चितवन आइपुगेको छ । सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाबाट दुईवटा बसमा ११५ जना आएका छन् ।भरतपुरस्थित बसपार्कमा साढे ८ बजे आइपुगेर उनीहरूले खाना पकाएर खाएका हुन । ग्यास, तरकारी, प्लेट, पानी आफैँ ल्याएको कार्यकर्ता सुदिप प्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए । महोत्तरी गौशालाबाट २५० जना कार्यकर्ता ५ बजे बसपार्क आइपुगेका थिए । चामल र तरकारी आफनै कार्यकर्ताबाट उठाएको गौशाला नगर कमिटी अध्यक्ष अजय कुमार कुशवाहले जानकारी दिए । होटेलमा बसेर र्खर्च गर्नुभन्दा आफै ल्याएर पकाएर खाएको उनले बताए । उनीहरू खाना खाइसकेर महाधिव
यिनै हुन्, टिकटकमा मुुठ्ठी ठोक्काएर गरिबलाई पैसा दिँदै हिड्ने गिविना मगर: के छ त उनको यति ठूलो आयस्राेत ?
काठमाडौँ – सोसल मिडिया टिकटकमा सेवानै धर्म हो भन्ने मनकारी जो गरीब, दुःखी को साक्षात्कार भगवान भएर निकै भाइरल महान चेली जो हातमा मुठ्ठी पारेर द्ववांग हान्न लगाउदै सडक पेटीमा सुत्ने भोका, गरीब र असक्तलाई खुल्ला मनले सहयोग गर्ने मगरजातिको महान छोरी(चेली) गिभिना मगर । पोखरामा बसोबास गर्ने २४ वर्षीया गिभिना पेशागत रूपमा उनि शिक्षिका पनि हुन। आफ्नो खाली रहेको समयमा उनले टिकटकमा अरुले भन्दा भिन्नै किसिमको भिडियो बनाएर अपलोड गर्ने गर्छिन। जुन भिडियोमा उनले सडकमा जिवन बिताइरहेका मानिसहरूलाई आर्थिक सहयोग देखि खाने कुरा तथा कपडाहरु दिएर सहयोग गर्दछिन् ‌। टिकटकमा धेरै किसिमका भिडियोहरु हेर्न सकिन्छ तर सोसल मिडिया बाट पनि एक किसिमको सहयोग र सन्देश दिन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हुन उनीतपाईको कुनैपनि सम्बन्धलाई दिगो र सफल बनाउँन सबैभन्दा पहिले तपाईमा बिश्वास हुनु पर्दछ । सधै सकारात्मक सोच पनि हु
Nov252021 by admin2No Comments
३८ वर्षका न्यूरोसर्जन डा.सुवाष लोहनीको निधन भएको छ । टोखास्थित ग्राण्डी टावरमा बेहोस अवस्थामा फेला परेका छन । सोमबार दिउसो करीब ३ बजेतिर ओछ्यानमै बेहोस अवस्थामा फेला परेका लोहनीलाई अस्पताल पुर्याएलगत्तै चिकित्सकहरुले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीका अनुसार डा.लोहनीले दे’ह’त्या’ग ग’रे’को जनाईएको छ। लोहनीलाई देशकै सबैभन्दा आशाजनक न्यूरोसर्जनका रुपमा लिइन्थ्यो । लोहनीको निधनले चिकित्सा क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको र उनको निधनले स्तव्ध बनाएको उनका सथिहरुले बताएका छन । लामोसमय न्यूरो हस्पिटल बाँसबारीमा काम गरेका लोहनी हाल नेशनल न्यूरो सेन्टरमा आवद्ध थिए । यता, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल–कोरियामैत्री नगरपालिका अस्पतालले निःशुल्क मुटुरोग परीक्षण तथा निःशुल्क ईको (मुटुको भिडियो एक्सरे) सेवा सञ्चालन गरेको छ । शिविरमा अन्य सेवामा समेत २० प्रतिशत छुटको
एमाले देश लु’टेको पैसाले नारायणीमा भोज गर्दैछ : रन्जित तामाङ
काठमाडाैं। अखिल (क्रान्तिकारी) का निवर्तमान अध्यक्ष रन्जित तामाङले देश लुटेको पैसाले एमालेले चितवनमा भोज गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) माइनगरपालीका इलामको नगर सम्मेलनलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै तामाङले चितवनमा पार्टी अधिवेशन गरिरहेको नेकपा एमाले माथि यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले साढे तीन वर्ष जनताको मतको अपमान गर्दै ओलीले मजाक र ठट्टा गरेर बिताएको बताए। उनले ले केपी वली नेतृत्वको सरकारको भ्रष्टाचार छानबिन हुनुपर्ने माग समेत गरे। तामाङले भने ,’केपी ओली सरकारले इतिहासमा पहिले कहिल्यै नभएको भ्रष्टाचार गरेको छ र त्यही देश लुटेको पैसाले नारायणी किनारमा ‘पिकनिक’ आयोजना गरेर धुलो उडाइरहेको छ । हामी ओली सरकारका पालाम भएको अभूतपूर्व भ्रष्टाचारमाथि छानविनको माग गर्दछौं ।’ आफ्नो अधिकांश समय केपी ओली र एमालेको आलोचनामा खर्चेका तामाङले ओलीमाथि गणतन्त्रको संघर्षमा भागेको र गणत
१. चितवनमा मासु र महंगो व्रा’ण्डका म’दिराको माग वढ्यो
२. बिचरा , भर्खरै बिहे गरेका थिए : खुकुरी प्र’हार बाट कलिलै उमेरमा गयाे ज्या’न
३. बले र प्रिज्माको भयो ‘ब्रे’कअप’ ! दुवै अलग अलग बाटोमा यसबारे प्रिज्माले दिईन यस्तो प्र’ष्टीकर’ण
४. अभिनेता राजेश हमालको घरमा १३ वर्षपछि नयाँ सदस्यको आगमन
५. नेता पुनलाई विश्वमै दुर्लभ रोग, बैंककमा पनि सुधार नभएपछि थप उपचारका लागि चीनको सेनजेन लगियो